MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Brand New 2019 | Mitsubishi | Yangon Region
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Brand New 2019 - Check with seller
Num. Airbags: 7
✍️ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် / Model Years
Brand New 2019 / စက်ရုံထုပ်ကားအသစ်
✍️အင်ဂျင်ပါဝါ / Engine Power
1500 CC (Turbo) (ဓါတ်ဆီ)
✍️အရောင် / Color
ပုလဲအဖြူ / Pearl White
✍️မောင်းနှင်သည့်စနစ် / Drive system
ဘယ်မောင်း / left hand Drive
✍️လုံခြုံရေးစနစ် / Safety
Driver Air bag4/ Passenger Air bag 3
Original TV/ Blind Spot Monitor
All seat Leather / Front Seat Motor 1
Electronic Packing Break
Power Window / Cruise Control
Paddle Shift / Round Sonars
Front Seat Heater/
Xenon Head Light / Front Fog Light
✍️For more information plz call
Contact : Ko Ye KYAW
Name : Ko Ye KYAW
Mitsubishi Colt ( Sky Blue ) 2007 1300Cc မှန်ချိုးမှန်ခေါက် Remote နဲ့ လုပ်နိုင် AC အေးစိမ့်‌ ခုံဆက်လက်တင်ပါ (7G/****) YGN အတိုက်အခိုက်ရှင်း ကားကောင်းကားသန့်လေး 1000 cc ဈေးသာသာ နဲ့ရမယ် ------- 137 သိန်း ☎️ 09767008458 မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အနီး ဖုန်းဆက်ပ...
Mitsubishi Pajero (3Doors ရှားပါး ) Model - 2000 ( 99 late) Engine - 3500 CC ( GDI ) Gear -5speed ( Auto & Manual ) Fuel - Petrol Kilo - 124,000 7C - MDY ( လိုင်စင်အသစ် ၂၀၂၀ ထိတိုးပြီး ) Cruise control, Sunroof, Original TV, Back camera, Orig...
09795934820 (#လဲထပ်ဆိုရွေငါး၂၅သိန်းလိုက်မည်) 155 သိန်း km 50000 အမှန် ကညန အတည်ပြုပြီး ygn 3j/*** Misisubishi japan. 1300cc /2015 model /push start #မိတ်ဆွေတို့ အနေဖြင့်155 သိန်းကိုစိတ်ဝင်စားပါက စိတ်ချမ်းသာစေရမဲ့ဈေးနှုန်းတခုနဲ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပေးချ...